စစ်မှန်သောနိူးထမှု၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များ | The Main Features of True Revival| Real Conversion
စက်တင်ဘာလ ( ၂၈ ) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
Lord’s Day Evening, September 28, 2014
ရှင်ပေတရုသည် ပင်္တေကုတ္တိနေ့တွင် မတ်တပ်ရပ်လျက် ယောလကျမ်းစာကို ကောက် နှုတ်၍ဟောကြားခဲ့သည်။
“ဟောဘူးသောအချက်ကား၊ နောင်ကာလ၌ လူမျိုးတကာတို့အပေါ်သို့ ငါ၏ဝိ ညာဉ်တော်ကို ငါသွန်းလောင်းမည် သင်တို့၏သားသမီးတို့သည် ပရောဖက် ဥာဏ်နှင့် ဟောပြောရကြလိမ့်မည်။ အသက်ငယ်သောသူတို့သည် ဗျာဒိတ်ရူ ပါရုံတို့ကို မြင်ရကြလိမ့်မည်။ အသက်ကြီးသောသူတို့သည်လည်း နိမိတ်အိပ် မက်တို့ကို မြင်မက်ရကြလိမ့်မည်။ ထိုကာလ၌လည်း ငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက် သော ယောက်ျားမိန်းမတို့အပေါ်တို့ ငါ၏ဝိညာဉ်တော်ကို ငါသွန်းလောင်း၍၊ သူတို့သည် ပရောဖက်ဥာဏ်နှင့် ဟောပြောရကြလိမ့်မည်။” ( တမန် ၂း ၁၇၊ ၁၈ )
ဘုရားသခင်သည် နိူးထမှုဖြစ်ပေါ်သည့်အချိန်တွင် ၎င်း “၏” ဝိညာဉ်တော်ကို သွန်း လောင်းခဲပါသည်။ သူက “ထိုကာလ၌လည်း ငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက် သော ယောက်ျားမိန်းမ တို့အပေါ်တို့ ငါ၏ဝိညာဉ်တော်ကို ငါသွန်းလောင်း၍” ဟုမိန့်တော်မူသည်။ ခေတ်သစ်ဘာသာ ပြန်ဆိုကျမ်းများက “၏”ဟူသောစကားလုံးကို ချန်လှစ်ထားခဲ့ကြသည်မှာ အံ့ဘွယ်ထူးဆန်းပေ သည်။ တိကျစွာဖော်ပြထားသော ဂရိစကားလုံးရှိပါသည်။ ၎င်းမှာ “apo” ဖြစ်ပါသည်။ Geneva ကျမ်းစာဟောင်းတွင်လည်း “ ငါ၏ဝိညာဉ်”ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ King James ကျမ်းစာအုပ် တွင်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် NASV နှင့် NKJV တို့တွင်သာ ၎င်းနှင့်ပါတ်သက်၍ ဘာသာပြန်ဆိုမှုအသစ်တွေရှိကြသည်။ ဤသည်မှာ ၎င်းတို့ကို အားမကိုး သည့်အကြောင်းရင်းတရပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်သာလျှင် King James အဟောင်းကိုသာ ကိုင်ဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်ပြောဆိုနေရသည်။ သင်အားကိုယုံကြည်နိူင်ပါသည်။ ထိုကျမ်းဟောင်း ဘာသာပြန်သူတို့သည် လိုအပ်သောအချက်အလက်များကို လုံးဝချန်လှစ်ထားကြမည်မဟုတ် ပေ။ လီဗရယ်အသိုင်းအဝိုင်းများ က ထိုအရာကို “Septuagint” များဟုခေါ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်က “အဓိပ္ပါယ်မရှိသောစကား” ဟုခေါ်သည်။ ယင်းမှာ ဓမ္မသစ်ဂရိမူရင်းတွင် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ကို ထည့်သွင်းထားရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုအပြင် သူသည် မုသားကိုသုံးထား ခြင်းလည်းမဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် မူရင်းပညတ္တိကျမ်းများကို ကိုးကား သောအခါ ဂရိစကားလုံးများကို ဓမ္မသစ် မှုတ်သွင်းခြင်းအားဖြင့် “မှုတ်သွင်းတော်မူ”သည်။ “ငါ၏ဝိညာဉ်”။ အဘယ့်ကြောင့် အရေးကြီး ပါသနည်း။ အဘယ့်ကြောင့်ဟု ကျွန်ုပ်ဆိုခဲ့သနည်း။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ဝိညာဉ်အားလုံးကို သွန်းလောင်းခဲ့သည်မဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သော အရာကိုသာသွန်းလောင်းပါသည်။ ၁၈၈၂တွင် အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သော George Smeaton က “ယောက်ျားများကိုပေးထား သည်အတိုင်းအတာနှင့် မူလဇစ်မြစ်၏အကန့်အသတ်မဲ့ပြည့်စုံ ခြင်းတို့၏ခြားနားမှုကိုခွဲခြမ်းသောအခါ ကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ဟူသောစကားလုံးတွင် ပျောက်ဆုံး သွားမည့်အရာမဟုတ်သော အဓိပ္ပါယ်၏အရိပ်လက္ခဏာရှိသည်” ဟုဆိုထားပါသည်။ (George Smeaton, The Doctrine of the Holy Spirit, ၁၈၈၂၊ The Banner of Truth မှ ပြန်လည်ထုတ်ဝေသည်၊ ၁၉၇၄၊ စာ-၂၈)တမန်တော်များ၏အသက်တာတွင်လည်း ထပ်မံသွန်း လောင်းခြင်းများကိုခံကြရသည်။ အကြောင်းမှာ ထပ်လောင်၍ပေးရန်များစွာရှိပါသည်။ “apo” (၏ )နှင့်ပါတ်သက်၍ Dr. A. T. Robertson က “သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်နှင့်အတူ အမြဲရှိနေသည်” ဟုဆိုထားပါသည်။ (Word Pictures in the New Testament, အတွဲ ၃၊ Broadman ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း၊ ၁၉၃၀၊ စာ-၂၆၊ တမန်တော် ၂း ၁၇နှင့်ပါတ် သက်သည့်မှတ်စု)
ကျွန်ုပ်သည် နိူးထမှုသုံးခုကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးသူဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Iain H. Murray ၏စကားကို အပြည့်အဝထောက်ခံ ထားပါသည်။ “နိူးထမှုများကိုမြင်တွေ့ခြင်းသည် အရင်ကမဖြစ်ဘူးသောအရာပေးထားခြင်းအ ကြောင်းပြောဆိုထားသည်။” (Iain H. Murray, Pentecost Today?, နိူးထမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သည့် သမ္မာကျမ်းစာအခြေ ခံတရား၊ The Banner of Truth Trust, ၁၉၉၈၊ စာ-၂၂) မြောက်အိုင်ယာလန်နိူင်ငံ၊ ယူစတာတွင် ၁၈၅၉ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွါးသည်နိူးထမှုကို တွေ့မြင်သည့်မျက်မြင်သက်သေတစ် ယောက်အနေဖြင့် ပြောဆိုသည်မှာ “သခင်ဘုရားသည် သူတို့အပေါ်မှုတ်သွင်းတော်မူသကဲ့သို့ ယောက်ျားများ ကခံစာကြရသည်။သူတို့သည် အစအဦးတွင် ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းများရှိပြီး နောက်ပိုင်းတွင် မျက်ရည်စက်များကို မိုးရေသဖွယ်ချိုးခဲ့ကြပေသည်။ ၎င်းနောက် ဖော်ပြ၍မရ နိူင်သောမေတ္တာ ဖြင့် တစ်ဦးကိုတစ်ဦးချစ်ကြသည်” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ (William Gibson, The Year of Grace,aHistory of the Ulster Revival of 1859, Elliott, 1860, စာ- ၄၃၉ ) ၁၈၆ဝခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၂၉ )ရက်နေ့တွင် Rev. D. C. Jones က “ပုံမှန်ထက်လွန်ကဲ သော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လွှမ်းမိုးမှုထဲသို့ ကျွန်ုပ်တို့အလည်အပတ်ရောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် အသင်းတော်လေးက မျှော်လင့်စောင့်မျှော်နေသောအချိန်တွင် လေမုန်တိုင်းငယ်ကဲ့ သို့ ရောက်ရှိလာသည်” ဟုဆိုသည်။ (Murray, ထပ်၍၊ စာ- ၂၅ ) ထိုအရာမှာ ပထမဆုံးအ ကြိမ် နိူးထမှုရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တတိယအကြိမ်မြောက်မြင်တွေ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်အသက်ရှင်နေသ၍မေ့ပျေက်မရနိူင်လောက်အောင် ရုတ်တရက် ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။
ယခုတွင် စစ်မှန်သောနိူးထမှု၌ မည်သူမျှထင်မှတ်မထားသည့်အရာများဖြစ်ပျက်တတ် သည်ကို သတိပြုရပါမည်။ ဤသည်တို့မှာ နိူးထမှုအချဳိ႔တွင်သာဖြစ်ပွားပြီး နိူးထမှုတိုင်းတွင်ဖြစ် ပျက်သည်မဟုတ်။ ထိုအရာထဲမှ အနည်းငယ်ကို ကျွန်ုပ်ဖော်ပြပါမည်။ ဤအချက်အလက်များ မှာ Dr. Martyn Lloyd-Jones ၏ နိူးထမှု စာအုပ်ထဲတွင်ရှိသည့် အချို့သောနေရာများမှ ဆွဲထုတ်ဖော်ပြထားခြင်း ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ( ကားတိုင်လမ်းစာအုပ်များ၊ ၁၉၈၇) ထို့အပြင် ကျွန်ုပ် ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသမျှသောအတွေ့အကြုံနှင့်လေ့လာသုံးသပ်ချက်ထဲမှလည်းဖော်ပြထားပါသည်။
၁။ ဘာသာစကား။ ပထမဆုံးနိူးထမှုဖြစ်သည့် ပင်္တကုတ္တိနေ့တွင် “သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ကပေးထားသည်ဖြစ်၍ အခြားသောဘာသာစကားကိုပြော ဆိုခြင်းကိုစတင်” ကြကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အားသွန်သင်ထားပါသည်။(တ ၂း ၄) ကျွန်တော်နှင့်ရင်းနှီးသောပင်္တေကုတ္တိအသင်းတော်များစွာက ၎င်းသည် အဓိကအင်္ဂါရပ်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိူးထမှုတိုင်းတွင် ဤအရာပါဝင်ရမည်ဟူ၍လည်း ကောင်းဆိုကြသည်။ ထိုခံယူချက်ကို ငြင်းပယ်ရန် အချက်နှစ်ချက်ရှိပါသည်။ ၁။ တမန်တော် ၂ တွင်တွေ့ရှိရသောအခြားသောဘာသာစကားမှာ လူ့ဘာသာ စကားဖြစ်ပါသည်။၎င်းသည် နိူင်ငံရပ်ခြားဘာသာစကားပင်ဖြစ်ပါသည်။ တမန် ၂း ၆-၁၁ တွင် ရှင်းလင်းစွာတွေ့မြင်ရပါသည်။ “လူတိုင်းက မိမိတို့ဘာသာစ ကားဖြင့်ပြောကြောင်းကို ကြားကြသည်။” ( တမန် ၂း ၆ ) “ကျွန်ုပ်တို့သည် မွေး ဖွါးရာမိခင်ဘာသာစကားဖြင့် မည်သို့ကြားသိနိူင်သနည်း။” ( တမန် ၂း ၈ ) “ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏အံ့ဘွယ်လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည့် မိမိဘာသာစ ကားဖြင့်ပြောကြောင်းကို ကြားကြသည်” ဟုအဆုံးသတ်ကာ ဘာသာစကားအ ဖွဲ့များစွာကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ ( တမန် ၂း ၁၁ ) သူတို့သည် ခေတ်သစ် ပင်္တေကုတ္တိအသင်းတော်နှင့် ကာရေ့စ်မက်တစ် အသင်းတော်တို့ အသုံးပြုပြောဆိုနေသောအရာနှင့်မတူဘဲ ကွဲပြားခြားနားသည်မှာ ထင်ရှားလှပါ သည်။ သူတို့သည် ဤသို့လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် သမ္မာကျမ်းစာထဲ မှ အခြားအရာများကို နှုတ်ယူကြပေသည်။ထိုအရာကို ကျွန်ုပ်မပြောလိုပါ။ ကျွန်ုပ်ပြောလိုသည်မှာ “သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လုပ်ဆောင်မှုကြောင့်” ပင်္တေကုတ္တိနေ့တွင်ရှိသောသူတို့သည် နိူင်ငံရပ်ခြားဘာသာစကားကို ပြောဆိုခဲ့ ကြသည်။ (တမန် ၂း ၄ ) ထိုအကြောင်းအရာသည် နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သည် မှာ ကျွန်ုပ်သံသယမဖြစ်ပါ။ သို့ရာတွင် နိူးထမှု၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတော့မ ဟုတ်ပါ။ အကြောင်းမှာ ဤအကြောင်းအရာဖြစ်ပျက်ခြင်းလုံးဝမရှိသည့် နိူးထမှုကို တမန်တော်ထဲတွင် တွေ့ရှိရပါသည်။ ၂။ ဖင်နီ၏ပိုကဲ့မှုတောင်မဟုတ် ဘဲ ၂၀ ရာစုတွင်ဖြစ်ပေါ်သည့် ရှုပ်ထွေးသောနိူးထမှုမတိုင်မှီတွင် ပရုတဲ့တင်းအ သင်းတော်များတွင် ဤဘာသာစကားမပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါ။ နားထောင်ခြင်းကု ရပ်တန်းကရပ်ပါ။ ကျွန်ုပြောဆိုသောရာကို သင်နားထောင်လျှင် ဤအရာကို သင်လက်သင့်ခံရာရောက်ပေသည်။ ရှုတ်ထွေးသောနိူးထမှုသည် “ဆုံးဖြတ်ဝါ ဒ”လည်းပါဝင်ပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်ကာလတွင်မှားယွင်းသောအယူဝါဒဟု သတ်မှတ်ရမည့် ပင်္တေကုတ္တိအယူဝါဒ နှင့် ကာရေ့စ်မက်တစ်တို့ပုံစံမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်ကာလတွင်ရှိသည့် “မှားယွင်းသောနိူးထမှု”တွင် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ၎င်းတို့၏ဇစ်မြစ်များရှိပေသည်။ အချို့သောပင်္တေကုတ္တိအသင်းတော်များနှင့် ကာရေ့မက်တစ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်အပြည့်အဝယုံ ကြည်ပါသည်။ အခြားသောဘာသာစကားသည် ပင်္တေကုတ္တိအသင်းတော်များ လက်ခံကြသကဲ့သို့ နှစ်ဆယ်ရာစုမတိုင်မှီတွင် ပရိုတဲ့တင်းနိူးထမှုသမိုင်းတွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိပေ။
၂။ “မီးလျှံကဲ့သို့သောဘာသာစကား” ( တမန် ၂း ၃ ) ထိုအရာမှာ တစ်ကြိမ် တစ်ခါဖြစ်သောအဖြစ်အပျက်ဖြစ်သတည်း။ တမန်တော်ဝတ္ထု သို့မဟုတ် အခြား သောအသင်းတော်သမိုင်းတွင် အခြားနိူးထမှုတရပ်မပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါ။
၃။ နတ်ဆိုးစွဲသောသူတို့၏အထဲမှ နတ်ဆိုးတို့သည် ပြင်းစွာသောအသံနှင့် အော်ဟစ်လျက် ထွက်သွားကြ၏။ (တမန် ၈း ၇ ) အများတို့သည်လည်း ပကတိ အဖြစ်သို့ရောက်ကြ၏။( တမန် ဂး ၇ )ထိုသို့သောအကြောင်းအရာသဘောတ ရားသည်လည်း ပင်္တေကုတ္တိနိူးထမှုတွင်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ဤသည်မှာ နိူးထမှု၏အဓိကအကြောင်းအရာမဟုတ်ပါ။ တမန်တော်ဝတ္ထုရှိအ ခြားနိူးထမှုတွင်လည်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ ဤသို့သောအရာကို အဓိကအ ကြောင်းတရားအဖြစ်ထားရှိလျက် “ရယ်ရွှင်ဖွယ်ရာနိူးထမှု”ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် သူတို့သည် မှားယွင်းစွာခံယူကြသည်။ ဤအကြောင်းအရာလုံး၀ဖြစ် ပျက်ခြင်းမရှိသည့် နိူးထမှုများစွာ ခရစ်ယာန်သမိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအပြင် တမန်တော်ဝတ္ထုထဲတွင်လည်း နိူးထမှုများစွာရှိပါသည်။
၄။ တမန်တော်များသည် တမန်တော် ၄း ၁-၄ တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် နိူးထမှုကြီးတွင် တရားဟောကြားပြီးနောက် အချုပ်ခံနေကြရသည်။ သို့ရာတွင် ချုပ်နှောင်ခံရခြင်းသည် တမန်တော်ဝတ္ထုတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် နိူးထမှု လားလုံးတွင် ပေါင်းပါခြင်းမရှိပါ။ ခရစ်ယာန်သမိုင်းတွင် တစ်ခါတစ်ရံ ထိုသို့ဖြစ် နိူင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အမြဲတမ်းထိုသို့မဖြစ်နိူင်ပါ။ နှုတ်ကပါတ်တော်ဟော ကြားသောသူများချုပ်နှောင်ခံရခြင်းသည် နိူးထမှု၏အဓိကအကြောင်းတရာတစ် ရားတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုနိူင်ပါသည်။
၅။ တမန်တော် ၄း ၃၁ တွင်ရှိသောအိမ်လှုပ်ခြင်း။ Duncan Campbell က ၁၉၄၀ နောက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားသည့် နိူးထမှုအစတွင်လည်း ထိုသို့ဖြစ်ပါ သည်။ သို့သော် အခြားတမန်တော်ဝတ္ထုတွင် ထိုသို့မဖြစ်ပါ။ နိူးထမှုသမ်ိုင်းတွင် လည်း ထိုသို့မဖြစ်ပါ။ ထို့ကြောင့် အိမ်လှုပ်ခြင်းသည်လည်း နိူးထမှု၏အဓိက အကြောင်းရင်းမဟုတ်ပါ။
၆။ တမန်တော် ၁၉း ၁၉- ၂၀ တွင်ဖော်ပြထားသည့် ဧဖက်မြို့တွင် မီးရှို့ထား သောစာအုပ်။ ဧဖက်မြို့တွင် နိူးထမှုဖြစ်ပေါ်သည့်အချိန်တွင် လူတို့သည် မှော် စာအုပ်များကိုယူလာကြပြီး ၎င်းတို့ကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးကြသည်။ “ထိုသခင်ဘုရား ၏သာသနာတော်သည် တန်ခိုးနှင့်တိုးပွါး၍ အောင်မြင်လေ၏။”(၁၉း ၂၀ ) Virginia ရှိ Fundamental Baptist အသင်းတော်တွင်ဖြစ်သည့် နိူးထမှုကို ကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့သည်။ တရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်တွင် ကျွန်ုပ်ပထမဆုံးတွေ့ သောနိူးထမှုအတွင်းတွင် စာအုပ်များကိုမူ မီးရှို့ခြင်းမပြုကြပေ။ တမန်ဝတ္ထုရှိ သည့် အခြားနိူးထမှုအတွင်းတွင်လည်း ထိုသို့သောအရာမဖြစ်ခဲ့ပါ။ သို့ဖြစ်၍ ဤသည်မှာ နိူးထမှုတွင်တွေ့ရှိရသောအဓိကအကြောင်းအရာမဟုတ်ဘဲ အဓိကမဟုတ်သောအကြောင်းအရာသာဖြစ်သည်ဟု မှတ်ချက်ပြုပါသည်။
၇။ အပြစ်ဝန်ခံခြင်းကိုဖွင့်ပြခြင်း။ နိူးထမှုအချို့တွင် လူတို့သည် ၎င်းတို့၏အပြစ် များကို လူသိရှင်ကြားဝန်ခံမှုပြုကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ ရံဖန်ရံခါဖြစ်နိူင်ပါသည်။ ၁၉၀၄ခုနှစ်တွင် ဝေးလနိူင်ငံ Kentucky ရှိ Asbury College လည်းကောင်း၊ ၁၉၆ဝခုနှစ်တွင် တရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်တွင်လည်းကောင်း ဖြစ်ပွါးခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ပင်္တေကုတ္တိနေ့တွင်ဖြစ်ပျက်သောအရာကို သူတို့မလုပ်ဆောင်ကြပါ။ ပထမနိူးထမှုကြီးနှင့် အခြားနိူးထမှုတို့တွင်လည်း ပင်္တေကုတ္တိနေ့ကကဲ့သို့မ ဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် လူအများရှေ့မှောက်တွင် အပြစ်ဝန်ခံခြင်းသည် သဘောရိုး သာဖြစ်ပြီး အဓိကမဟုတ်ပါ။
၈။ ဟစ်ကြော်ပြီး မြေပြင်တွင် လဲကျခြင်း။ ထိုသို့သောအရာကို Jonathan Edwards ၏အသင်းတော်ရှိ Northampton တွင် နိူးထမှုဖြစ်သည့်အချိန်တွင် အနည်းငယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်ဝိညာဉ်နိူးထမှုကြီးတွင် Dr. Asahel Nettleton က အစည်းအဝေးအချို့တွင်လုပ်ဆောင်သည်။ သို့ရာတွင် စကော့တလန်ရှိ Cambuslang တွင်ဖြစ်သောနိူးထမှု၌ တရားဟောစဉ်အခါဖြစ် သောလည်း George Whitefield ၏အမှုတော်လုပ်ငန်းတွင်လည်း ဖြစ်ပျက်ခြင်း မရှိပါ။ လန်ဒန်တွင်ပြုလုပ်သော C. H. Spurgeon တို့လက်ထက်ဖြစ်သည့် တတိယအကြိမ်နိူးထမှုတွင်လည်း အဓိကအကြောင်းတရားမဟုတ်ခဲ့ပါ။ သမ္မာ ကျမ်းစာအရပြောနိူင်သလောက်ပြောရမည်ဆိုလျှင် ပင်္တေကုတ္တိနေ့ကကဲ့သို့မ ဖြစ်ခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့် ဟစ်ကြော်ခြင်းနှင့် မြေပြင်ပေါ်သို့လဲကျခြင်းသည် နိူးထမှု၏အဓိကအကြောင်းတရားမဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင် ဧဝံဂေလိဆရာက နှဖူးကိုတို့ထိသောအခါ “ဝိညာဉ်တော်၌လဲကျခြင်း” သည်လည်း နိူးထမှုတွင် မဖြစ်ပါချေ။ နိူးထမှုသမျှတွေ့သမျှတွင် ထိုသို့သောအရာကို မသိမမြင်ပါ။ (Iain Murray ၏စာအုပ်အခန်း ၆ ကိုကြည့်ပါ။ Pentecost Today? နိူးထမှုသဘောပေါက်ခြင်းဆိုင်ရာ သမ္မာကျမ်းစာအခြေခံ၊ Banner of Truth, ၁၉၉၈၊ စာ- ၁၃၄-၁၆၉ )
ဤအကြောင်းအရာလုံး၀ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိဟု ကျွန်ုပ်မဆိုသာသော်လည်း ၎င်းတို့သည် အဓိကအကြောင်းတရား၊ ရာစုတိုင်းတွင်ဖြစ်ပျက်သောနိူးထမှုတိုင်းတွင် မှန်ကန်မှုမရှိပါပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသို့သောအရာများကိုကြည့်ရှုနေလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ကို တယူသန်တက်ကြွမှု သို့မဟုတ် နတ်ဆိုးကိုယ်တိုင်တို့၏လှည့်ဖြားမှုကိုခံရပေမည်။ Dr. Martyn Lloyd-Jones က “သင်သည် အစွန်အဖျားဖြစ်စေသောအရာနှင့် အခြေခံသဘောကို အဓိကမထားပါနှင့်” ဟုဆို သည်။ (နိူးထမှု၊ Crossway Books, ၁၉၈၇၊ စာ- ၆၀ )ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့သမျှတွင်ရုပ်ဆိုးအကျဉ်း တန်ဆုံးနိူးထမှုမှာ ရယ်မောခြင်းကို နိူးထမှု၏အဓိကအကြောင်းအရာဟုထင်မှတ်ကြရာ ဖရော်ရင်သာပြည်နယ်ရှိ “ရယ်မောခြင်းနိူးထမှု” ပင်ဖြစ်ပါသည်။ Dr. Arthur B. Houk နှင့် ကျွန်ုပ်က လူတို့သည် ခြင်္သေ့ကဲ့သို့ဟိန်း၍ မြောက်ကဲ့သို့အော်ဟစ်ရာ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်ရှိ ပင်ဆိုတွင်လည်း စိတ်ပျက်ခြောက်လှန့်ဖွယ်ရာ နိူးထမှုကိုလည်း တစ်ညတွေ့ခဲ့ကြပါသည်။ ဤအရာက သူတို့ကို အကူအညီပေးသည်ဟု အဘယ့်ကြောင့်တွေးထင်ကြသည်ကို ကျွန်ုပ်နား မလည်နိူင်ပါ။ ၎င်းသည် အကျိုးမရှိဟန်တူသော်လည်း အနိမ့်ကျဆုံးအစီအစဉ်၏စိတ်ချေက် ချားဖွယ်ရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအမှုအရာအားလုံးတွင် ခရစ်တော်ကားအဘယ်မှာနည်း။
၉။ သင်သည် နိူးထမှု “ဖြစ်လာရန်” မလုပ်ဆောင်နိူင်ပါ။ ထိုအရာမှာ “ဆုံးဖြတ် ချက်ဝါဒ” မှဖြစ်သည်။ အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဆုတောင်ခြင်းကလည်း နိူးထမှုကို အာမခံချက်မပေးနိူင်ပါ။ နိူးထမှုသည် ခရစ်ယာန်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုပေါ်တွင်မူ တည်သည်ဟူသောသွန်သင်ခြင်းသည် Charles G. Finney မှလာခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ ( ၁၇၉၂- ၁၈၇၅ ) ၎င်းက ကြီးမားသောနာကျင်မှုကိုပြုသည်။ အကြောင်းမှာ ၎င်းက လူတို့အား နိူးထမှုတွင် ဘုရားသခင်ကိုမှီခိုမည့်အစား သူတို့အပေါ် အားကိုးခြင်းအကြောင်းကို ဆင်ခြင်မိစေသည်။ ဘုရားသခင်က သာလျှင် နိူးထမှုစေလွှတ်မည့်အချိန်ကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နိူးထမှုအတွက် ဆုတောင်းနိူင်သည်၊ ဆုတောင်းသင့်သည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ထံ နိူးထမှုစေလွှတ်မည့်အချိန်ကို ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ထား ပါသည်။ ကျွန်ုပ္တို့လုပ်နိူင်သောအရာတစ်ခုမျှ နိူးထမှုအတွက် အာမ,မခံပါ။ ဘု ရားသခင်၏လက်တော်ထဲ၌သာအပြည့်အဝရှိပါသည်။ “ဘုရားသခင်သည် တန်ခိုးကို ပိုင်တော်မူ၏” (ဆာလံ ၆၂း ၁၁ ) (Iain H. Murray, Pentecost Today?၊ The Banner of Truth Trust, ၁၉၉၈၊ စာ-၈-၁၆ )
နိူးထမှုတွင် အဘယ်အရာထပ်၍ဖြစ်သေးသနည်း။ စစ်မှန်သောနိူးထမှုကြီး၏အဓိက အကြောင်းတရားကားအဘယ်နည်း။ စစ်မှန်သောနိူးထမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ Dr. Lloyd-Jones က စာရင်းပြုစုထားပါသည်။ သူသည် ၎င်း၏စာအုပ်ဖြစ်သည့်နိူးထမှုထဲတွင် ထိုအကြောင်းအရာ၏ အဓိကအ ကြောင်းအရာ၌ ပင်္တေကုတ္တိနေ့အကြောင်းလေ့လာခြင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ ဤအရာ များကို အခြေခံထားပါသည်။ (ထပ်၍၊ စာ ၂၀၄-၂၁၁ )
၁။ ဘုရားသခင်သည် သူတို့အလယ်တွင် ဆင်းကြွခဲ့သည်။ လူတိုင်းသည် ၎င်း ၏မျက်မှောက်တော်၊ ဘုန်းတော်၊ နှင့် တန်ခိုးတော်ကို ခံစားခဲ့ကြသည်။ အသင်း တော်သိရှိသောနိူးထမှုတွင် ထိုထိုသောအရာဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါသည်။ ( ဘုရား သခင်ရှိကြောင်းကို ပြောပြစရာတောင်မလိုပေ။သူရှိကြောင်း သင်သိသည်။ ထိုအရာမှာ ကျွန်ုပ်တွေ့ဖူးသောနိူးထမှုတွင်ကြုံတွေ့ရသည့်အရာဖြစ်ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ကြောက်ရွှံ့ရိုသေခြင်းသဘောနှင့်အံ့ဩခြင်းများရှိသည်။ လူတို့သည် ကြောက်ရွံ့ရိုသေခြင်း၏ရိုက်ခတ်မှုနှင့် သန့်ရှင်းသောဘုရားသခင်၏ တည်ရှိမှုကို အမှန်တကယ်လက်တွေ့ခံစားခဲ့ကြသည်။)
၂။ ထိုအမှုအရာ၏အကျိုးရလဒ်တစ်ခုအနေဖြင့် အသင်းတော်အား သမ္မာတရား နှင့်ပါတ်သက်သည့်ကြီးမားသည့်စိတ်ချမှုကိုဖြစ်စေပါသည်။ လူတို့သည် သမ္မာ ကျမ်းစာတရားကို ကောင်းစွာသိမြင်ကြသည်။ ဤသည်မှာ နိူးထမှုဖြစ်သောအ ချိန်တွင်ကြုံတွေ့ရသည့် အတွေ့အကြုံပင်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ အသင်းတော်သည် ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့် ချီးမွမ်းခြင်းဖြင့်ပြည့်လျက်လျှံလျက်ရှိပါ သည်။ လူတို့က သူတို့အလယ်တွင် ဘုရားသခင်ဆင်းကြွလာသည်ဟု ရုတ်တ ရက်သိလိုက်ကြသည်။ “သူတို့မျက်နှာတွင်ထင်ရှားသည်။ ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲ ကြသည်။ ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့်ချီးမွမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေသည့် ကောင်းကင်မျက်နှာပြင် သည် သူတို့အလယ်တွင်ဆင်သည့်လာပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ပြော၍မကုန်နိူင်သောဘုန်းတော်နှင့်ပြည့်လျက်ရှိသော ပျော်ရွင်ခြင်းကိုပေးကာ ထူးခြားသောပင်ကိုယ်အရည်အသွေးကိုပေးသည်။ ( Lloyd-Jones, ထပ်၍၊ စာ ၂၀၆ )
၄။ နိူးထမှုဖြစ်ပေါ်သောအချိန်တွင် လူတို့အား ဘုရားကျောင်းသို့လာပြီး နှုတ်ကပါတ်တော်နားထောင်ရန် တိုက်တွန်းရန်မလိုအပ်ပေ။ သူတို့သည် စဉ်ဆက်မပြတ်လာကြပေမည်။ သူတို့သည် ညတိုင်းလာ၍ ပင်္တေကုတ္တိနေ့တွင် ဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့ နာရီပေါင်းများစွာနေထိုင်ကြလိမ့်မည်။
၅။ တရားဒေသနာဟောကြားခြင်းတွင်လည်း အသစ်သောတန်ခိုးနှင့် သတ္တိကို ပေးတော်မူသည်။ ဧဝံဂေလိတရားကို သတ္တိရှိစွာဟောကြားခြင်းသည် စစ်မှန် သောနိူးထမှုတိုင်း၏အဓိကအကြောင်းတရားပင်ဖြစ်ပါသည်။ တရားဟောခြင်း တွင်လည်း အသစ်သောတန်ခိုးကိုရရှိပေသည်။ လူတို့က ထိုအရာကို နားထောင်ကြသည်။ နိူးထမှုဆင်းသက်လာသောအခါ တရားဒေသနာကိုယ် တိုင်သည် လူအုပ်ကြီးကို ဆွဲခေါ်ပေမည်။
၆။ နိူးထမှုဖြစ်လာသောအခါ လူတို့သည် မိမိတို့အပြစ်ကိုမြင်လာကြပါသည်။ ပျောက်သောသူများသည် ၎င်းတို့ပြုမိခဲ့သောအပြစ်များကို ပြန်လည်သိမြင်လာ ပြီး ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေကြသည်။ ၎င်းမှာ အသင်းတော်သို့ဘုရားသခင်စေလွှတ် တော်မူသောနိူးထမှုကြီး၏ကြီးမားသည့်သက်သေဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ အေးစက်ပြီးခြားနားမှုမရှိသောလူတို့သည် သူတို့ပြုသောအပြစ်ကြောင့် “လန့်နိူး ပြီး ကြောက်လန့်နေကြသည်။” (Lloyd-Jones, ထပ်၍၊ စာ ၂၀၉) သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်သည် ဆင်းသက်လာပြီး အပြစ်၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ နှင့် တရာစီ ရင်ခြင်း အကြောင်းကို သိနားလည်စေသည့် သက်သေပင်ဖြစ်ပါသည်။ (ယော ၁၆း ၈ ) ပင်္တေကုတ္တိနေ့တွင် သူတို့သည် အပြစ်ကိုသိမြင်ကြသဖြင့် ငိုကြွေးမြည် တမ်းကြသည်။ “ညီအစ်ကိုတို့၊ အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်း။” (တမန် ၂း ၃၇ ) စစ်မှန်သောနိူးထမှုတွင် ဤသို့ဖြစ်ပျက်လေ့ရှိပါသည်။ အပြစ်ကိုသိမြင်ခြင်းမရှိ လျှင် သင်ကြုံတွေ့သောနိူးထမှုသည် အတုအယောင်သာဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ နိူးထမှုတိုင်းတွင် အမှန်တကယ်ဖြစ်သည် အပြစ်ကိုသိမြင်ခြင်းရှိရမည္။ (Lloyd-Jones, ထပ်၍၊ စာ ၂၀၉ )
၇။ လူတို့သည် ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားကြသည်ဖြစ်၍ အပြစ်ခွင်လွှတ်ခြင်း ကျေးဇူးကို ခံစားခဲ့ကြသည်။ ယေရှုသည် ၎င်းတို့၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက် တစ်ခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ကြောင်းကို သူတို့သိမြင်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ သည် “ဆုံးဖြတ်ချက်ချရုံသက်သက်” မဟုတ်ပါ။ သူတို့သည် ခရစ်တော်ထံသို့ အပြေးတပိုင်းရောက်လာကြပြီး အသစ်သောအသက်တာကို ရရှိကြခြင်းပင်ဖြစ် ပါသည်။ သူတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြပြီးနောက်တွင် ဘ၀ဟောင်းကို စွန့် ပစ်ကြပါသည်။ သူတို့သည် ခရစ်တော်၏မေတ္တာနှင့်အသွေးတော်အကြောင်းကို များစွာပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ ခရစ်တော်သွန်းသော အသွေးတော်၏ရန်ငြိမ်းခြင်း သည် စစ်မှန်သောနိူးထမှုတိုင်းတွင်ရှိသည့် အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်ပါသည်။
၈။ ပြောင်းလဲလာသောသူများသည် အသင်းတော်နှင့်တွဲဖက်ပါဝင်လာကြ သည်။ သူတို့ကို “သင်းဝင်စေကြသည်” (တမန် ၂း ၄၇ ) နိူးထမှုတွင် “နောက် ၌လိုက်၍ကူညီပေးရန်” မလိုအပ်ပေ။ သူတို့သည် အသင်းတော်သို့ အလိုအ လျောက်ရောက်ရှိလာကြခြင်းဖြစ်၍ အသင်းတော်ဝတ်ပြုအစီအစဉ်မှ မောင်း ထုတ်လျှင်ပင်လုံးဝမရနိူင်ပါ။ ပထမဆုံး ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ခဲ့သောနိူးထမှုနှင့် အခြားနိူးထမှုတို့တွင် ထိုသို့သောအဖြစ်မျိုး ကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့ပေသည်။ သင်သည် ပြောင်းလဲလာသူတို့၏နောက်သို့လိုက်ရန်မလိုအပ်ပေ။ သူတို့သည် ဘုရားသခင် ၏တန်ခိုးတော်ကြောင့် အသင်းတော်မိဿဟာရသို့ရောက်ရှိလာကြသည်။ Dr. Lloyd-Jones က “သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တန်ခိုးသည်ရောက်လာသော အခါ သင်နှင့်ကျွန်ုပ် နှစ်ပေါင်း ၅၀ သို့မဟုတ် တစ်ရာလုပ်ဆောင်သောအလုပ်၏ အကျိုးဆက်ထက် တစ်နာရီအတွင် များစွာသောအရာဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်။ သနားကြင်နာမှုများသက်ရောက်လာစေရန် ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလယ်တွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို တဖန်သွန်းလောင်းပေး ရန်လည်းဆုတောင်းရမည်။” (Lloyd-Jones ထပ်၍၊ စာ ၂၁၀-၂၁၁ )
ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်္ဗျား၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိတို့အသင်းတော်နိူးထမှုရှိသည့်အ ချိန်ကာလတွင် အသက်ရှင်ကြသည်မဟုတ်၊ သို့သော် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ယေရှုထံသို့ လူအချို့ကို ဆွဲခေါ်နေပေသည်။ ယေရှုခရစ်ကို အလျှင်အမြန်ယုံကြည်လက်ခံရန် ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပါ၏။ သင့်အားအပြစ်တရားမှ ကယ်ချွတ်ရန် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံ တော်မူခဲ့သည်။ သင့်အားအပြစ်မှဆေးကြောပေးရန် ထာဝရအသွေးတော်ကို သင့်အတွက် သွန်းလောင်းပေးခဲ့သည်။ သင့်အားထာဝရအသက်ကိုပေးတော်မူရန် သေခြင်းမှထမြောက် တော်မူခဲ့သည်။ နိူးထမှုမလာသေးသော်လည်း ယေရှုကို ယခုယုံကြည်လက်ခံရန် ကျွန်ုပ်ခေါ် ဖိတ်ပါ၏။ Dr. Chan ကျေးဇူးပြု၍ဆုတောင်းပေးပါ။ အာမင်……..။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို Mr. Abel Prudhomme ကဆောင်ရွက်သည်။ တမန် ၈း ၅-၈
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ Mr. Benjamin Kincaid Griffith ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းသည်။ “အသက်ရှင်ရာကျူး”၊
Bessie P. Head, ၁၈၅၀-၁၉၃၆ ရေးစပ်သည်။ )